चतुर किसान जसले बाँदर धपाउन कुकुरलाई बाघ बनाए, यो देखेर सवै चकित! - Lekbesi Khabar
चतुर किसान जसले बाँदर धपाउन कुकुरलाई बाघ बनाए, यो देखेर सवै चकित!
काठमाडौं : नेपालमा मात्रै होईन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बाँदरले किसानहरुलाई हैरान पारेका छन् । नेपालमा त अहिले जस्ले बाँदर धपाउँछ उसैलाई भोट दिन्छौ भन्ने जनताहरु पनि आइसकेका छन् । किसानहरुले बाँदरबाट बाली जोगाउन अनेक उपाय अपनाउने गर्छन । अहिले त स्थानीय सरकारहरुले समेत बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट नै छुट्टाउदै आएको छ ।
कुकुरलाई साँच्चीकै बाघ ठानेपछि बाँदरहरु खेतको आसपास आउन समेत डराएको उनी बताउँछन् । ती किसानले कुकुरलाई बाघ बनाउनका लागि सामान्य रङको प्रयोग नगरी हेयर डाईको प्रयोग गरेको बताएका छन् । यसको प्रतिकृयामा कुकुर भुक्यो भने के हुन्छ रु भन्दै जिज्ञासा राखिएको छ । मानिसहरुले बाघकोजस्तै गर्जन भएको कए स्पीकर लगाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
१५ मंसिर २०७६, आईतवार १७:१९ December 1, 2019
२१ बर्षिय युवती ६७ बर्षिय बृद्धसंग बिबाह गर्नुको रहस्य खुल्यो (भिडियो सहित)